Brezila, navadik’ireo mpakasary ho toy ny trano fanasàna sary hanehoany ny fihibohan-dry zareo ny trano fonenany · Global Voices teny Malagasy
Teknina ahafahana manipy ny sary avy any an'arabe izy ity
Nandika (fr) i Laila Le Guen
Voadika ny 07 Aogositra 2020 3:10 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Italiano, Nederlands, русский, Esperanto , Português
Guilherme Santos sy Gabriela Thomaz, samy 32 taona, miaraka amin'ny zanany lahy Joaquim, 7 taona. Ny arabe ao Porto Alegre (fanjakan'i Rio Grande do Sul) faritra onenan'ity ankohonana ity no nafetaka eraky ny rindrin'ny trano fandraisambahiny. Sary an'i Guilherme Santos tao amin'ny Obs-cu-ra, nahazoana alàlana taminy.
[Raha tsy asiana fanamarihana manokana, mitondra mankany aminà lahatsoratra amin'ny fiteny pôrtiogey avokoa ny rohy rehetra.]
Toy ireo olona marobe ao Brezila nandritra ny valanaretina ‘coronavirus’, dia nihiboka tao amin'ny efitranony niaraka tamin'ny vadiny sy ny alikany tao Rio de Janeiro koa i Bruno Alencastro, 35 taona.
Nisy fotoana, tany am-piandohan'ny volana Aprily, nahatsiaro ho sahirana izy. Vao avy nodinganin'i Brezila ny isa 7 000 tamin'ny tranganà ‘coronavirus’, araka ireo tarehimarika navoakan'ny sampandraharaha misahana ny fahasalamam-bahoaka tany amin'ireo fanjakàna samihafa, ary efa nihoatra ny 250 sahady ireo matin'ilay aretina. Toromariky ny ministeran'ny fahasalamana ny hitondràna arontava mba ho fepetra fiarovana.
Ny 3 Aogositra, nahatratra 2,7 tapitrisa no isan'ireo tranga voamarina tao amin'ny firenena, ary olona 94 665 no namoy ny ainy, araka ny vaovao nampitain'ny ministeran'ny fahasalamàna. Laharana faharoa manerana ny tany amin'ny resaka isan'ny namoy ny ainy vokatry ny COVID-19 no misy an'i Brezila, manaraka an'i Etazonia.
Nitazana avy eny am-baravarankely i Bruno Alencastro. « Nijery ny manodidina ahy aho ary nahatsapa ho manana adidy handrakitra ity fotoana ity. Saingy, etsy andaniny, nanontany tena aho ny amin'izay fomba azo antoka hanatanterahako azy tsara », hoy izy nanazava tamin'ny Global Voices tamin'ny antsafa iray tao amin'ny Skype.
Na nandalo fiovàna marobe aza ny sehatry ny fakàna sary tato anatin'ny taompolo vitsivitsy lasa, mitovy ihany ny fotokevitra ijoroana : ny fitaovana fakàna sary dia mitoetra hatrany ho boaty mainty iray misy lavaka kely ahafahan'ny hazavana miditra, ka ahafahana mandrakitra sary amin'ny alàlan'ny akora mora mirakitra sary (na fitaovana nomerika izy, na taratasy arzantika).
Bruno Alencastro, izay manampahaizana manokana amin'ny famoronana votoaty natao hojeren'ny maso, dia mahatsiahy fa nanana hevitra iray hoe : « Ary raha avadiko ho efitrano maizina moa ny efitra fandraisako vahiny ? » Araka izany, notakonany taratasy ‘kraft’ sy fandraikitra (adhesif) ny varavarankely Taorian'ny andrana vitsivitsy, nasian'ny lavaka kely nanana savaivo toy ny an'ilay horonana fandraikitra, dia izay: hita ao amin'ny efitrano fandraisana vahiny ny arabe, izay toa lavitra be teo aloha. Ery amin'ny rindrina mifanatrika kosa no hita ny sary mivadika maneho ireo hazo sy ireo trano manodidina. Nitatra araka izany ny fetran'ireo rindrina efatr'ilay efitrano.
Tao Brezila, tamin'ny Febroary no natao ny hetsika voalohany nataon'ny governemanta hiatrehana ilay valanaretina. Tamin'izany no nisy Breziliàna 34 nampodiana avy any Wuhan, Shina. Ny 26 Febroary no hita ny fisian'ny tranga voalohany voamarina tao amin'ny firenena, tao São Paulo. Tamin'ny Martsa no voarakitra ny olona voalohany namoy ny ainy noho ny valanaretina coronavirus, vehivavy iray mpiasa an-trano [Angl] mponina tao Rio de Janeiro. Nohafainganin'ireo tomponandraikitra ara-panjakana sy monisipaly araka izany ny fametrahana ireo fepetra momba ny elanelana. Nampihatra ny fiasàna avy any an-tranony ireo olona afaka nanao izany.
Eo ambanin'ilay lavaka idiran'ny hazavana no nametrahan'i Bruno de Alencastro ny fitaovana fakàntsary matianina ananany. Nantsoiny ny vadiny, Greyce Vargas, 35 taona, sy ny alikany Arnaldo, mba tsy ho very tadidy io fotoana niarahan'izy telo teo amin'ny latabatry ny efitra fandraisambahiny io, sary iray hafa hita mifanindry aminy ilay miditra avy any an'arabe.
Bruno Alencastro sy ny vadiny Greyce Vargas miaraka amin'ny alikan-dry zareo, ao amin'ny efitranon-dry zareo ao Rio de Janeiro. Saripika an'i Bruno Alecastro tao amin'ny Obs-cu-ra, nahazoana alàlana.
« Takatro fa ankoatra ny endrika dia nisy zavatra hafa tena nahery vaika tao. Zavatra izay miteny amin'ny olona amin'ny alàlan'ny retsika (aterak'ilay sary) ary ny fotoana fihibohana iainan'ny olona maro», hoy izy mitantara.
Araka izany, tapaka ny hevitr'ilay mpakasary fa hamoaka ny vokatra ao amin'ny kaontiny Instagram, sy hanasa namana sy mpiaramiasa roambinifolo hafa hanao toy izany koa.
« Miaraka aminà sarin'olona 13 avy amina toerana samihafa, mahazo votoaty betsaka izahay. Nokajiako fatratra ny hieritreritra momba an'ireo olona miaina toedraharaha isankarazany, any ambanivolo, afovoan-tanàna, anivon'ny fianakaviana, samirery… Tsoriko fa tany am-boalohany, tsy noheveriko mihitsy ho voasintona ny olona. »
Gaga izy, tsy hoe fotsiny nanaiky daholo ireo olona nifampiresahana hanao ilay fanamby ary hizara ny sarin-dry zareo, fa ireo mpampiasa aterineto avy any ivelan'ny faribolan'ny finamànana misy azy koa nanomboka nandefa ny fandraisan'izy ireo anjara, avy any amin'ny lafivalon'ny tany.
Vetivety foana i Bruno Alencastro dia voatondro tanaty saripika ampolony maro isanandro, ary mpampita vaovao erantany marobe no [Angl] niresaka ilay tetikasa. Teo araka izany no nandraisany fanapahana ny hanao ho ofisialy ny maha-tetikasa ifandrimbonana ny « Obs-cu-ra », tamin'ny alàlan'ny fanatontosàna lahatsary iray nataony hanomezana torohevitra momba ireo teknika tsara indrindra mba hananganana efitrano mazina ho an'ny tena.
Amin'izao fotoana izao izy dia mihevitra ny hitady fanohanana sy loharano mpamatsy vola ho entina manitatra ilay tetikasa hivelatra amin'ny sehatra erantany :
« Raisiko ho toy ny andraikitra izany ho entina mitahiry mandrakizay ny fahatsiarovana izao vanimpotoana izao, miaraka amin'izay tsy tomombana sy izay fanitsiana natao taminy. Ny zavatra miseho ankehitriny dia tsy maintsy ampiatiana sy atsofoka ao anatin'ny androany sy ny hoavy. »
Indreto saripika vitsivitsy avy amin'ilay tetikasa.
Sofia Wolffenbutel, 13 taona, sary nopihan'i Ricardo rainy tao an'efitranony. Amina efitrano iray ao Florianópolis (Fanjakan'i Santa Catarina) no monina ilay raimpianakaviana sy ny zanany vavy. Sary an'i Ricardo Wolffenbute tao amin'ny Obs-cu-ra, nahazoana alàlana taminy.
Leo Savaris, 37 taona, mihiboka an-trano miaraka amin'ny vadiny sy ny zanany lahy, ao Novo Hamburgo (Fanjakan'i Rio Grande do Sul). Eo amin'ny sary, manontany tena ilay ankohonana momba ity fomba fiaina vaovao ity, izay mitondra azy ireo tsy hisara-mianakavy mandritra ny fotoana rehetra. Eo ambonin-dry zareo, amin'ny rindrin'ny efitrano, ahitàna ny fifetaky ny sary avy any an'arabe. Sary an'i Leo Savaris tao amin'ny Obs-cu-ra, nahazoana alàlana taminy.
Josué Braun, mpiangaly mozika sady mpakasary, 36 taona, ao Feliz (Fanjakan'i Rio Grande do Sul). Sary an'i Josué Braun tao amin'ny Obs-cu-ra, nahazoana alàlana taminy.
Ny mpanao gazety Felipe Martini, 32 taona, sy ilay mpahay maritrano Rafaela di Giorgio, 31 taona, ao an-tokantranon-dry zareo ao Rio de Janeiro. Foana noho ny fisian'ilay valanaretina ny mariazy sy ny fifindrantoerana ho any Espaina nokasain-dry zareo. Sary an'i Felipe Martini tao amin'ny Obs-cu-ra, nahazoana alàlana taminy.
Ao Cachoeira (Rio Grande do Sul), ny mpakasary Eveline Medeiros manafetaka ny sary avy any an'arabe ho eo ambonin'ny alitara fijereny karatra. Sary an'i Eveline Medeiros tao amin'ny Obs-cu-ra, nahazoana alàlana taminy.
Caroline Muller dia sady mpandihy ‘ballerine’ no mpakasary ao São Leopoldo (Rio Grande do Sul). Mihiboka an-trano miaraka amin'ny olon-tiany, izay mpianatra ho mpitsabo ary miasa eny amin'ny lohalaharana miady amin'ny Covid-19. Sary an'i Caroline Muller tao amin'ny Obs-cu-ra, nahazoana alàlana taminy..
Ao Niterói (Rio de Janeiro), Beatriz Grieco, mpianatra momba ny sarimihetsika, maka sary ny tenany miatrika fihibohana ao an'efitranony, toerana sady fiasàna no fianarany ihany koa. Sary an'i Beatriz Grieco tao amin'ny Obs-cu-ra, nahazoana alàlana taminy.
Ao Três Coroas (Rio Grande do Sul), ny mpakasary Pedro Rocha manamboatra sarin'ireo zanany eo an-tokotanin'ny fonenany. Sary an'i Pedro Rocha tao amin'ny Obs-cu-ra, nahazoana alàlana taminy..